Global Voices teny Malagasy » Septambra Izao, Izay Midika Fa Fotoan’ny Andron’ny Fahalalahan’ny Rindrambaiko · Global Voices teny Malagasy » Print
Septambra Izao, Izay Midika Fa Fotoan'ny Andron'ny Fahalalahan'ny Rindrambaiko
Voadika ny 17 Septambra 2016 12:08 GMT 1	 · Mpanoratra Subhashish Panigrahi Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, India, Nepal, Sri Lanka, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Hetsika mihoatra ny zato no voasoratra anarana manerana ny tany ho an'ny Andron'ny Fahalalahan'ny Rindrambaiko 2016.
Manodidina fotsiny ny 17 Septambra Andron'ny Fahalalahan'ny Rindrambaiko  (SFD), izay mankalaza ny fampiasana rindrambaiko malalaka sy mampiasa loharano misokatra. Rehefa nanomboka tamin'ny 2004 ny andro voalohany, 12 monja ireo ekipa avy amina toerana samihafa no nanatevin-daharana, fa efa nanomboka nitombo ho mpisoratra anarana miisa zato izany manerina izao tontolo izao, miankina amin'ny taona.
Inona ny FOSS, rindrambaiko maimaimpoana, loharano misokatra, ary ny FLOSS?
Ny Rindrambaiko maimaimpoana sady mampiasa loharano misokatra (FOSS na F/OSS) ary rindrambaiko maimaimpoana sy malalaka ary mampiasa loharano misokatra (FLOSS) dia fiteny anangonana ireo rindrambaiko maimaim-poana sy ny rindrambaiko azo idirana malalaka. Noraisin'ilay mpiaro ny fahalalahan'ny rindrambaiko, Richard Stallman, tamin'ny 1983, manana anarana maro ny rindrambaiko maimaimpoana — rindrambaiko maimaimpoana, rindrambaiko manaja fahalalahana ary ny rindrambaiko malalaka no sasany amin'izy ireny. Araky ny voafaritry ny Free Software Foundation , ny iray tamin'ireo mpiaro ny fahalalahan'ny rindrambaiko tany am-piandohana, fa tsy vitan'ny mamela ny mpampiasa hampiasa an-kahalalahana tanteraka irery ihany ny rindrambaiko maimaimpoana, fa ihany koa mianatra, manova ary mizara ny dikan'ny rindrambaiko rehetra nasiana fanovàna hifanaraka amin'ny zavamisy, sady amin'ny endrika ara-barotra no tsia. Ny fizarana ny rindrambaiko ho an'ny endrika ara-barotra sy tsy ara-barotra, na izany aza, dia miankina amin'ny karazana fahazoan-dalana manokana namoahana ilay rindrambaiko. Noforonina mba ho fomba hafa amin'ny rindrambaiko malalaka tamin'ny 1998 ny “Open source “‘ nataon'ilay fikambanana Open Source Initiative  mpiaro ny ara-panabeazana. Matetika foronina avy amin'ny fiarahamiasa ny rindrambaiko mampiasa loharano misokatra, lasa azo ampiasaina miaraka amin'ny fangony, ary manome zo izay mampiasa azy hianatra, hanova ary hizara ny rindrambaiko amin'ny olona rehetra na inona na inona antony.
Tohanana  fikambanana maro iraisam-pirenena toy ny Google, Canonical, Free Software Foundation, Joomla, Creative Commons sy Linux Journal, misarika ny aingam-panahiny avy amin'ny filozofia nasandratry ny olona toa an'i Richard Stallman ny Andron'ny Fahalalahan'ny Rindrambaiko, izay milaza  fa momba ny fahafahana avokoa ny rindrambaiko maimaimpoana, ary tsy voatery ho tsy nandaniana vola lany fa manome fidirana malalaka ho an'ireo mpampiasa avy amin'ny hery sy dindon'ireo mpamokatra rindrambaiko manan-tompo.
Mandrisika ny rehetra mba hivory ao amin'ny tanàna misy azy ny SFD (ity misy sarintanin ‘ireo toerana hikarakarana ny SFD amin'ity taona ity), hanabe ny olona manodidina azy mikasika ny rindrambaiko maimaimpoana, ary hampiroborobo ny zavatra ilofosany ao amin'ny tambajotra sosialy (miaraka amin'ny tenifototra #SFD2016  amin'ity taona ity). Misy hackathons ihany koa (mipiraty ny rindrambaiko maimaimpoana mba hanovana ny fitsipika sy hamoronana izay tian'ny olona iray hanànana ao anatiny ao), hitantana lasinà rindrambaiko maimaimpoana, ary mba ho tia mamorona mihitsy aza miaraka amin'ny fampanidinana drôna iray ampiasàna rindrambaiko maimaimpoana .
Avy any Azia Atsimo, dia misy hetsika fankalazana miisa 13 ao India , valo ao Nepal , iray ao Bangladesh  ary efatra ao Sri Lanka .
Efa samy hitan'ireo firenena ao Azia Atsimo ny fampiasana ny rindrambaiko maimaimpoana sy ny rindrambaiko mampiasa loharano misokatra, nataon'ny olon-tsotra, fikambanana sy ny governemanta. Natsangana tao Bengaluru, India, tamin'ny 2010 ny Hetsika Rindrambaiko Maimaim-poana ao India  mba hiasa toy ny fampiraisam-pirenena ao amin'ireo toko maro isam-paritra miasa mba hampiroborobo sy hampitombo ny hetsika rindrambaiko maimaimpoana ao India.
Nanomboka  vavahadin-tserasera fakàna angon-drakitra misokatra ao amin'ny vohikala data.gov.in  ny governemanta Indiana mba hizaràna ireo angona midadasika toy ny tahirin-kevitra amin'ny fanisàm-bahoaka ampiasàna ireo fahazoan-dalana maimaimpoana. Manamafy ny fananganana rindrambaiko mampiasa loharano misokatra ny politika vaovaon ‘ny governemanta. Ary nangatahan’ ny Minisitry ny Fifandraisana sy Fampahalalam-baovao ireo mpivarotra mba hampiditra ny fampiasana rindrambaiko mampiasa loharano misokatra rehefa manao sosokevitra.
Toy izany koa, misy maro ireo vondrom-piarahamonina malalaka sy mampiasa loharano misokatra ary fikambanana miasa avy ao amin'ny saikin-tany, toy ny Mozilla India , Wikimedia India , ny Centre for Internet and Society, Open Knowledge India , Mozilla Bangladesh , Wikimedia Bangladesh,  Bangladesh Open Source Network , Open Knowledge Bangladesh , Mozilla Nepal , Wikimedians of Nepal,  Open Knowledge Nepal , Wikimedia Community User Group Pakistan , ary ny Lanka Software Foundation  ao Sri Lanka.
Mohammad Jahangir Alam,mpampianatra ao amin'ny Oniversite Atsimon'i Bangladesh, milaza ao aminà taratasim-pikarohana iray  fa ny fampiasana ny rindrambaiko mampiasa loharano misokatra dia afaka manampy ny governemanta hitahiry vola be izay lany amin'ny fividianana rindrambaiko manan-tompo:
Betsaka ny volan'ny governemanta mety ho voatahiry raha toa ka mampiasa ny rindrambaiko mampiasa loharano misokatra izy amin'ny sehatra Fampahalalam-baovao samihafan'ny biraon'ny governemanta sy ny sehatra hafa, Satria ny governemanta mamatsy solosaina any amin'ireo ivontoerana fanabeazana rehetra, miainga avy any an-tsekoly ka hatrany amin'ny oniversite ary mampiasa ny rindrambaiko manan-tompo. Noho io antony io, mila mandany vola be dia be amin'ny fividianana rindrambaiko maro manan-tompo ny governemanta mba hampandehanana tsara ireo solosaina. Ny iray hafa dia mandoa vola be ny governemanta ho an'ireo mpivarotra samihafa amin'ny fividianana karazana rindrambaiko isankarazany hametrahana ny tetikasa e-Governance. Araka izany, afaka mampiasa ny rindrambaiko mampiasa loharano misokatra ny governemanta amin'ny fametrahana ireo teikasany mba hampihenàna ny sandan'ireo tetikasa.
Mijere hevitra misimisy kokoa  amin'ny fankalazàna ny Andron'ny Fahalalahan'ny Rindrambaiko, ary sasany vitsivitsy eto .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/09/17/88676/
 Andron'ny Fahalalahan'ny Rindrambaiko: http://www.softwarefreedomday.org/
 Free Software Foundation: https://www.gnu.org/philosophy/free-software-intro.html
 Open source: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Open_Source_Definition
 Open Source Initiative: https://opensource.org/history
 Mandrisika : https://www.fsf.org/blogs/community/its-software-freedom-day
 fampanidinana drôna iray ampiasàna rindrambaiko maimaimpoana: http://www.htxt.co.za/2015/09/03/flying-freedom-day-gloriously-combines-drones-and-craft-beer/
 hetsika fankalazana miisa 13 ao India: http://wiki.softwarefreedomday.org/2016/India
 valo ao Nepal: http://wiki.softwarefreedomday.org/2016/Nepal?highlight=%28%5CbCategoryCountry2016%5Cb%29
 iray ao Bangladesh: http://wiki.softwarefreedomday.org/2016/Bangladesh?highlight=%28%5CbCategoryCountry2016%5Cb%29
 efatra ao Sri Lanka: http://wiki.softwarefreedomday.org/2016/Sri%20Lanka?highlight=%28%5CbCategoryCountry2016%5Cb%29
 Hetsika Rindrambaiko Maimaim-poana ao India : http://www.fsmi.in/about
 politika vaovaon: http://meity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/policy_on_adoption_of_oss.pdf
 Mozilla India: http://mozillaindia.org/
 Wikimedia India: https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_India
 Centre for Internet and Society, : https://meta.wikimedia.org/wiki/CISA2K
 Open Knowledge India: http://in.okfn.org/about/
 Mozilla Bangladesh: http://mozillabd.org/
 Wikimedia Bangladesh,: https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Bangladesh
 Bangladesh Open Source Network: http://www.bdosn.org/about-bdosn
 Open Knowledge Bangladesh: https://okfn.org/network/bangladesh/
 Mozilla Nepal: https://wiki.mozilla.org/Nepal
 Wikimedians of Nepal,: https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Nepal
 Open Knowledge Nepal: http://np.okfn.org/about/
 Wikimedia Community User Group Pakistan: https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Community_User_Group_Pakistan
 Lanka Software Foundation: http://www.opensource.lk/
 taratasim-pikarohana iray: http://research.ijcaonline.org/volume42/number18/pxc3878099.pdf
 hevitra misimisy kokoa: https://opensource.com/life/15/9/how-will-you-celebrate-software-freedom-day